Ny herinandro faha-26 amin'ny maha-bevohoka (volana faha-6 amin'ny maha-bevohoka) - inona no mitranga, inona no tadiavin'ny zazakely?
Ny herinandro faha-26 amin'ny fitondrana vohoka - inona no mitranga amin'ny zazakely sy ny mamany?
Mandritra ny vanim-potoana fitondrana ny reny no manamarika fiovana maro eo amin'ny vatany. Mihamitombo ny vokatra ary mihalava izany. Ny fahafantarana ny fiovana amin'ny herinandro faha-26 amin'ny fitondrana vohoka, izay fitsipika amin'izao vanim-potoana izao, vehivavy iray dia afaka manameloka ny fihodinana amin'ny fotoana.
Herinandro 26 isaky ny bevohoka - firy volana?
Ao amin'ny mpampihetsi-po, ny fe-potoana misy ny fitondrana vohoka amin'izao fotoana izao dia napetraka herinandro. Ny dokotera dia manondro foana ny faharetan'ny fitondrantena, amin'ny fampiasana ity fotoana ity. Na izany aza, maro amin'ireo renim-pianakaviana no maniry ny hanisa ny isan'ireo volana hatramin'ny fotoam-piofanana. Mandritra ny dingan'ny fandikana herinandro maro ho volana maro dia misy ny fisavorovoroana.
Azonao atao ny mamolavola anao manokana, saingy mila mahafantatra ireo fitsipika fototra amin'ny lisitra ianao. Noho izany, ny dokotera dia mandray ny faharetan'ny volana dia 30 andro foana, ary ny isan'ireo herinandro ao aminy 4. Noho ireo fepetra ireo dia afaka manombana ianao: 26 herinandro vohoka - 6 volana sy 2 herinandro. Ny volana fahenina amin'ny maha-bevohoka dia tena mihomehy, ary mialoha ny fisehoan'ilay zaza dia mitoetra 14 herinandro.
Ny herinandro faha-26 amin'ny fitondrana vohoka - inona no mitranga amin'ny zaza?
Ny zaza amin'ny herinandro faha-26 amin'ny maha-bevohoka dia manohy mivoatra mavitrika. Ny avokavoka amin'izao fotoana izao dia mamolavola ny endriky ny triatra, ary eo amin'ny endriny dia manomboka mitongilana ny habakabaka - singa manokana izay manakana ny alveoli tsy hianjera mandritra ny fitsaboana voalohany zaza vao teraka. Ny fifandraisana dia eo anelanelan'ny atidoha sy ny cortex adrenal, izay mampiavaka ny vatana hormona.
Mitohy ny rafitra maso. Ny taolam-paty dia mbola tsy voavolavola tanteraka, fa ny foetus dia efa manomboka amin'ny fahazavana amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fiasan'ny motera. Mitombo ihany koa ny rafi-pitondran'ny musculoskeletal - miharihary kokoa ny hetsika, ny hamafiny sy ny hamafiny ny fisavorovoroana, ny horohorontany sy ny fikorontanana vokatry ny fitombon'ny zazakely.
Ny herinandro faha-26 amin'ny maha-bevohoka dia avo sy latsaky ny foitra
Ny lanjan'ny vatana sy ny fitomboan'ny zazakely dia mitombo amin'ny fitomboan'ny vanim-potoana fitondrana. Ny fetisy mandritra ny 26 herinandro ny bevohoka dia mahatratra 32-34 cm ny halavany (manomboka amin'ny satroka ka hatramin'ny satroboninahitra). Ny lanjany amin'izao fotoana izao dia 800-1000 g. Rehefa manao fanatanjahan-tena ny dokotera dia mihevitra ny habetsaky ny coccyx-parietal, izay tokony ho 23 santimetatra. Tokony ho marihina fa miankina amin'ny toe-javatra maromaro ireo fari-piainan'ny fivoarana ara-batana fetra:
ny vehivavy bevohoka.
Ny herinandro faha-26 amin'ny fitondrana vohoka - ny fivoaran'ny foza
Amin'ny vanim-potoan'ny fitondrana mandritra ny 26 herinandro, ny fampandrosoana ny zazakely dia mandeha amin'ny fanatsarana ny taova anatiny. Ny fiovana lehibe dia voamarika amin'ny asan'ny rafitra ngeza sy ny taova. Ny zaza dia afaka manavaka ny feony, ny feon'ny ray aman-dreniny, maneho ny fihetsiny manoloana ny fanovana ny mimicry nandre. Ny maso dia afaka manavaka ny hazavana sy ny haizina, manangona lokony.
Ny mpanome tsindrin-tsakafo ihany koa no miasa. Izy dia afaka manavaka ny tsiron'ny fluid amniotique, mitelina azy amin'ny ampahany kely. Amin'ny fiantombohan'ny herinandro faha-26 amin'ny maha-bevohoka dia misy ny fametrahana ny molotra, izay mijanona mandritra ny 5-6 taona monja amin'ny fiainan'ny ankizy. Ny rafitra fitsaboana dia manatanteraka ny fivoarany, izay manomana tsikelikely ny handray ny ampahany voalohany amin'ny rononon-jaza.
Herinandro 26 isaky ny fitondrana vohoka - ahoana ny endriky ny zazakely?
Ny zaza iray amin'ny herinandro 26 amin'ny fitondrana dia mitovy amin'ny zaza vao teraka. Ny endriky ny endriky ny endriny dia hita, ary rehefa manao fanatanjahan-tena izy dia afaka manatsoaka hevitra mikasika ny fitoviany amin'ny tenany na ny rainy ny reny. Ny kofehy hoditra dia mena, miaraka amin'ny karavasy madinika sy ketrona. Mihamitombo ny habetsahan'ny foetus, mihamitombo izy ireo ary manjombona ny hoditra.
Ny takelaka fantsika dia hita amin'ny rantsantanana, izay manakaiky ny sisiny indrindra. Ao amin'ny lohan'ilay lohana dia misy volom-borona izay manomboka mandoko tsikelikely noho ny fampitomboana ny pigment melanine. Noho ny fitomboan'ny fe-potoana dia mitombo ihany ny hamafin'ny volony. Eo amin'ny hoditra dia misy lavaka - lanugo, izay manampy amin'ny fitazonana ny hafanan'ny vatan'ny foetus.
Ny trompetra mandritra ny herinandro 26 herinandro
Ny zazakely amin'ny herinandro faha-26 amin'ny maha-bevohoka dia mavitrika. Ny toerana ao anaty lavaka fantsakana dia mbola betsaka, ka ampy ny toerana hanaovana ny fampiasany ara-batana. Ny ranon-tsavony, ny ranomandry, ny fihenjanana matetika, ny renim-piankohony dia mihaino tsara ary afaka mamaha azy ireo. Amin'ny alalan'ny fanombanana mivantana ny haavon'ny fihetsiky ny motera foetus dia afaka manatsoaka hevitra momba ny toetry ny fahasalamana sy ny toetry ny zazakely hoavy ny vehivavy.
Manisa ny foetus natao tamin'ny herinandro faha-26 amin'ny maha-bevohoka azy, ny dokotera dia manoro hevitra ny handany amin'ny andro, rehefa lehibe ny asan'ny zazakely. Ny fotoana tsara indrindra dia ny fandehanana amin'ny 9 hatramin'ny 19 ora. Mandritra io fotoana io, ny zaza dia tokony ho tsapany in-10 farafaharatsiny. Ny fihenan-tsakafo na, mifanohitra, ny fihenan-dava manan-danja eo amin'ity mari-pamantarana ity dia manondro fandikana, ny ankamaroan'izy ireo dia ny hypoxia foetal.
Ny herinandro faha-26 amin'ny maha-bevohoka - inona no mitranga amin'ny mama?
Rehefa manomboka ny herinandro faha-26 amin'ny maha-bevohoka, inona no mitranga ao amin'ny vatana, fanovana inona no notandremana - te hahalala ny reniny rehetra. Ny tena mahamarika dia ny fitomboan'ny lanjany. Isaky ny andro androany dia miha-maro kokoa ny vehivavy. Amin'izao fotoana izao dia tsy tokony hihoatra ny 9-10 kg izy io raha oharina, raha oharina amin'ny lanjany alohan'ny fitondrana vohoka. Ny fandaniana ireo soatoavina ireo dia mahafaoka ny fampandrosoana ny gestosis - fampihorohoroana ny fitondrana vohoka, miaraka amin'ny fitomboan'ny tosidra, ny endriky ny oida. Ny fisian'ny soritr'aretina dia tokony ho fotoana fanaraha-maso ny vehivavy bevohoka.
Ny fahanterana 26 herinandro - fandrosoana ny foetus sy ny fahatsapana
Isan'andro dia manamarika fiovana vaovao eo amin'ny toetrany ny reny. Rehefa tonga ny herinandro faha-26 amin'ny maha-bevohoka, matetika ny fahatsapan'ny vehivavy dia mifandray amin'ny fahasarotan'ny fofona. Ny vatan'ny uterus dia manohy manohitra ny diapragma, ka noho izany dia lasa kely kokoa ny toerana ho an'ny havokavoka. Vokatr'izany dia miha-mitombo ny fofona, ary mitombo ny fihenan'ny fihetseham-pon'ny rivotra. Fohy ny fofon'aina: voalohany, ny vehivavy bevohoka dia mahita azy irery ihany rehefa mandeha lavitra, mihanika ny tohatra, saingy mitombo ny vanim-potoana dia lasa tranga matetika izy.
Alao miaraka amin'ny dyspnea, miseho ny kitapo . Ny rafi-pandaminana dia mahazo tsindrona tsy tapaka avy amin'ny tranonjaza, ka mety hiditra ao amin'ny voankazo kely amin'ny tsoka kely ny jiosy. Matetika no mitranga izany rehefa avy nihinana. Zava-dehibe ny fanaraha-maso ny sakafo ary tsy overeat. Ny sakafo dia tsy tokony misy sahy betsaka, raha tsy izany dia hisy fiantraikany amin'ny fahasambaran'ny vehivavy bevohoka, fa koa ny lanjany.
Belly amin'ny herinandro 26 herinandro
Mihamaro foana ny foetus, ary mitombo koa ny taovam-pananahany. Ny tebiteby amin'ny herinandro faha-26 amin'ny bevohoka dia mahatratra 16 santimetatra. Amin'izay fotoana izay, ny ambany dia napetraka 26 cm eo amin'ny tsangambatony. Isaky ny herinandro manaraka dia lasa 1 santimetatra eo ho eo ny vavany. Noho ny fiovana toy izany dia miova ny drafitra ivelan'ny kibony, izay mihodina.
Ny fitomboan'ny taovam-panaovan-javatra mifandraika amin'ireo singa voalaza etsy ambony dia miteraka indrindra amin'ny fahatelo ambony. Mihamitombo ny habetsahan'ny fluid amniotiques, mihamitombo izy io, ary mihodina ny elatry ny vehivavy maro. Eo amin'ny hoditry ny hoditra avy eo amin'ny elatra mankany amin'ny pubis dia misy tarika mainty, izay tsy hita intsony rehefa teraka ilay zaza ary miova amin'ny hormonal background.
Fanokanana amin'ny fitondrana 26 herinandro
Amin'ny ankapobeny, ny 6 volana amin'ny maha-bevohoka dia tsy manavaka ny fiovan'ny volavolan-dalàna sy ny natiora ho an'ny vaginal. Izy ireo dia tsy tadidinao, madio mangarahara na mibaribary foana. Mandritra izany fotoana izany dia tsy misy ny fampidirana vahiny sy ny fofona. Ny fampitomboana ny volombava, ny loko miovaova ary ny endriny, ny endriky ny fofona mampinono dia mety manondro tsindrona na fiterahana amin'ny rafitra fananahana.
Ny mpifindra monina dia tranga matetika amin'ny vehivavy bevohoka. Manohitra ny fiovan'ny hormona, mitombo ny fitomboan'ny fambolena flora, izay miteraka fahatsapana manintona: ny fofona, ny fofona, ny fanala ny vulva, fotsy miaraka amin'ny tsimokaretina misy tsimokaretina mitovitovy. Mba hisorohana ny fanitsakitsahana dia tokony hifandray amin'ny mpitsabo mpanampy ny vehivavy iray amin'ny fanendrena fitsaboana.
Ny fahantrana tamin'ny herinandro faha-26 ny bevohoka
Back, tenda, tongotra - fialamboly mahazatra ny fahatsapana mahatsiravina amin'ny vehivavy. Miseho izy ireo alohan'ny hanombohan'ny herinandro faha-26 amin'ny maha-bevohoka azy. Ny endriny dia mifandray amin'ny fitomboan'ny diera sy ny fitaovana fitrandrahana ny vatan'ny vehivavy. Ny toetra dia ny fanamafisana ny fanaintainana amin'ny ora hariva, aorian'ny dingana lava, ny ezaka ara-batana. Mandritra izany fotoana izany dia maharary ny fahatsapana mampalahelo.
Ny fikarakarana manokana ny vehivavy dia tokony homena ny toe-draharaha rehefa mandratra mandritry ny 26 herinandro ny kibo. Ny tena manan-danja dia ny toetry ny fahatsapana marary. Vetivety dia raisina ho mpitsikilo ny dokotera, raha misintona ny alahelony, izay miteraka alahelo noho ny fanaintainana. Rehefa manova ny toeran'ny vatana ianao dia mandalo amin'ny tenany. Na izany aza, ilaina ny manavaka azy ireo amin'ny fifandonan'ny asa, izay mety mialoha ny fahaterahana aloha . Ny endri-javatra miavaka amin'ity farany ity dia:
mitombo ny faharetana;
fampihenana ny fihenam-bidy;
ny fisian'ny rhythm.
Ultrasound amin'ny herinandro 26 herinandro
Amin'ny herinandro 26, ny ultrasound dia atao raha misy mari-pamantarana manokana. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny fandinihana dia atao raha misy ahiahy amin'ny fandikana ny fampandrosoana entraminera, ny tsy fahampian-tsakafo sy ny lozam-pifamoivoizana. Ny mpitsabo dia manombatombana ny foetus ivelany, jereo ny asan'ny taova anatiny. Mitandrema amin'ny placenta, manombantombana ny toerana misy azy, ny hateviny sy ny habeny, ny toetry ny rafi-pandehany.
Ny loza amin'ny herinandro faha-26 amin'ny maha-bevohoka
Ny vanim-potoan'ny fitondrana 26 herinandro dia miorina tsara. Tsy azo atao intsony ny fanalan-jaza an-tsitrapo amin'izao fotoana izao, saingy amin'ny tranga tsy fahita, mety hitranga ny fahaterahana vao teraka. Ao anatin'ireo loza mety hitranga amin'ny vehivavy bevohoka mandritra ny vanim-potoana toy izao, ny mpitsabo dia nisongadina:
nitombo ny tsindry;
fahitana tsy fahita;
Fiterahana amin'ny 26 herinandro vohoka
Ny fanontaniana lehibe raisin'ny vehivavy amin'ny fampitahorana ny fahaterahana vao haingana dia ny hoe raha tafavoaka velona ireo ankizy teraka tamin'ny herinandro 26. Milaza ny mpitsabo fa miankina amin'ny fivoaran'ny fivoarana ny zavatra rehetra. Raha tsy misy, dia lehibe (60-70%) ny fahafahana mamela zazakely aloha. Raha mikasika ireo antony mety hahatonga ny fiterahana, raha 26 herinandro fotsiny ny bevohoka, avy eo:
ambany sy polyhydramnios;
ny fahavitrihan'ny fampandrosoana entraminera;
ny tsy fahampian-tsakafo.
Acne mandritra ny fitondrana vohoka
Inona no mety ho an'ny vehivavy bevohoka amin'ny hafanana?
Grippy an-kibon'ny vehivavy eo am-piterahana
Fepetra takiana mifototra amin'ny asa sy ny fitondrana vohoka
Ny labozia Gexicon - torolàlana ampiasaina amin'ny fitondrana vohoka
Fiovana eo amin'ny vatan'ny vehivavy mandritra ny fitondrana vohoka
Herinandro 4 herinandro - inona no mitranga?
Karlovy Vary sira - fampiharana ny fatiantoka ary amin'ny cosmetology
Inona no raketin'ny voankazo?
Mexidol - analogues
Ascorutin amin'ny fitondrana vohoka
Shoes for graduation 2014
Fiarovana fiarovana GSM ho an'ny trano fonenana
Vavaka ho an'ny paroasy amin'ny batisa
Jessica Biel amin'ny endriny tena izy: ny somersault indray dia nanosika ny fon'ny olona an-tapitrisany
Ny tonon-kira hafahafa
Azon'ny ankizy atao ve ny mifoka rivotra?
Diaskintest no fitsipika
Ahoana ny famelana ny hoditra any amin'ny toerana akaiky?
Hetsi-paka ao amin'ny trano fandroana
Prudik any amin'ny firenena amin'ny tanany manokana
Ahoana no mampitombo ny amandy?